Ogaden News Agency (ONA) – Shir-saxaafadeed ay wadajir u qabteen Dawlada Yemen iyo UNHCR oo Gudiga Qaxootiga S.Ogadenya uu ka qaybgalay
Shir-saxaafadeed ay wadajir u qabteen Dawlada Yemen iyo UNHCR oo Gudiga Qaxootiga S.Ogadenya uu ka qaybgalay
Posted by ONA Admin	/ September 17, 2013
Shir saxaafdeed lagu qabtay Magaalada Sana’a ee Caasimada wadankaas, Hotel Saba’a 16/9/2013 oo lagaga hadlayay arimo muhiim ah oo dhinacya badan taabanaysay ayaa waxaa kasoo qaygalay dhamaan Saxaafada dalkaYemen, hayday tahay mid gudaha ah (local) iyo kuwa caalamiga ee ka hawlgala dalkaa.
Waxaa dhanka DawladaYemenumatalayay shirka governor-ka ( duqa) magalada SANA’A iyo Ku-xigeenka Wasaarada Caafimaadka. Dhanka UNHCR ayaa waxaa joogay Wakiilka (Representative) Dalkaasi ujooga haya’dda UNHCR. MR. Bourne iyo xubno kale oo dhawra oo uu kamid yahay madaxa qaybta arimaha bulshada MR. SAMEWEELL, madaxa qaybta caafimaadka DR. Khaalid. Dhanka gudiyada qoxootiga waxaa joogay dhamaan qaxootiga dalka Yemen jooga gudiyadii matalayay. Gudiga Qoxootiga Ogadenia waxaa u matalayay Afar xubnood oo uu horkacayay G/gudiga MR. Hussein M. Dahir.
Shirka wuxuu biloowday saacadu markay ahayd 10:00 subaxnimo, waxaana furay Wakiilka UNHCR. Mr.Bourne oo ka warbixiyay xaalada qoxootiga ee ku sugan dalkaYemeniyo dhibka haysta iyo siday ugu baahan yihiin kaalmada wadamada deeqaha bixiya. Isagoo hadalka siiwata ayuu yidhi; “Waxaan u mahadnaqayaa dawladaYemenee wadankeeda gogosha ugu fidisay qoxootiyada faraha badan ee soo galaya walaw ayaynan dadka dalkaas soo galayaayi isku duruuf ahayn oo ay qaarkood nolol raadis yihiin (shaqotag) meesha qaarkale ay raadinayaan meel ay naftoodu ku badbaado.” Waxaana ka mid ah kuwaasi dadka ka imanaya Ogadenia ee soo galaya dalkan Yemen sidaas waxaa yidhi MR. Bourne.
Intaas kadib waxaa hadalkii lawareegay duqa magaalada SANA’A mr. Abdirazak oo runtii Aad u soo dhaweeyay shirkan noocan ah wuxuuna yidhi; “Shirkanoo kale horay umadhicin lakiin waxaan rajynayaa inuu maanta wixii ka dambeeya joogto noqon doono oo ay gudiyada qoxootiga oo matalaya shucubtooda iyo UNHCR oo u dhexaysa qoxootiga iyo dawldaYemenay noqdaan kuwo isku xidhan oo team qudha noqda.”
Kadib waxaa Su’aalihii loo furay saxafiyiintii iyo ka soo qayb galayashii shirka waxaana halkaas ka bilowady su’aalo lagu wajahay UNHCR iyo Dawlada Yemen-ba. Waxaa nasiib u yeeshay su’aashii labaad Gudiimiyaha Gudiga Qoxootiga S.Ogadenia Mudane Xuseen Makhtal wuxuuna ku blaabay hadalkisii; “Waxaan salaam qaaliya salaamayaa madaxda sharfta leh ee ka socota dawladaYemenee walaalaha noo ah ee aan martida u nahay gaar ahaan duqa magaalada SANA’A mr Abdirazaak iyo ku-xigenka wasaarada caafimaadka, sidoo kale madaxda UNHCR oo ugu horeeyo wakiilka UNHCR. Mr. Bourne iyo dhamaanba saxaafda farahaban ee joogta shirka. Waxaan ahay gudoomiyha Gudiga Qoxootiga Ogadenia ee dalkaYemen. Waxaan weydiinayaa dawladayemenmaxay ugu ogalaan wayday dadka qoxotigu inay si shacriya u dhaq-dhaqaaqaan oo ay wadanka kana baxaan si sharci ah kuna soogalaan sharci si ay dawladu canshuur iyo dakhli uga hesho oo dhaqaala u soo galiyaan dadka qaxootiga ah wadanka oo loo siin waayay sharci ay ku dhoofaan kuna soo laabtaan?”
Su’aashaa uu weydiiyay Gudoomiyaha waxay keentay in halmar la’isku daro sacab iyo soo dhawayn lasoo dhaweyay mudane Xuseen Makhtal.
Jawaabtii su’aashaasna waxaa qaatay duqa magaalada SANA’A oo yidhi; “Waan soo dhawaynaynaa arintaas waana mid loo baahnaa lakiin su’aashu waxay qusaysaa oo ay khaas u tahay wasaarda arimaha gudaha ee dalkaYemen, siday tahay baanuna ugu gudbinnaynaa, waanad ku mahadsan tahay Xuseen.”
Waxaa kaloo ka mid ahaa in shahaadooyin la gudoonyiiso gudayadii qoxootiga oo mudo shan sano ah la shaqaynayay UHNCR iyo 10 gabdhood oo qoxootiga kamid ah oo dhamastay tactliinta caafimaadka oo 3sano ah qaybta Umulisada.
Si kastaba ha ahaatee shirkan jara’id ee shalay ayaa wuxuu noqday mid magaca shacabka S.Ogadenia aad loogu soo celceliyo halka aan qowmiyadihii kale magacoodii marna carabka lagu dhufanin.
Ugu dambayntii saxaafadii meesha joogtay oo ay kamid ahaayeen Al-Jazeera, BBC iyo dhamaan TV-yada wadanka Yemen ayaa waraysi ka qaaday Gudoomiyaha Gudiga Qoxootiga S.Ogadenia iyo kuxigeenkiisa mudane Adeec. Waraysigaas ayaa isla xalayba laga soodayay TV-yada dalkaYemen.
Isku soo duuboo waxaa la odhan karaa wuxuu ahaa shirkan saxafi talaabo horumar leh aadna muhiim ugu ah qadiyadda shacabka S.Ogadenya.